Asụsụ Ikpe ziri ezi na-achọ ịmepụta ụwa ebe onye ọ bụla nwere ike itinye aka zuru oke na ọha mmadụ n'agbanyeghị asụsụ ha na-asụ. Anyị kwenyere na Asụsụ 411 nwere ike itinye aka na ngagharị ikpe ziri ezi nke asụsụ ma na-agba mbọ mgbe niile ịchọpụta ụzọ anyị nwere ike isi nwee mmetụta.
Anyị kwenyere na ịnweta asụsụ abụghị ihe okomoko, kama ọ bụ ikike. Site n'inye ntụgharị asụsụ dị ọnụ ala, anyị nwere olileanya inyere onye ọ bụla aka ịnweta ozi.
Asụsụ 411 na-arụcha ọrụ ọ bụla na nhazi oge yana ogo kachasị elu. Site n'ilekwasị anya na ọrụ ahaziri iche, ọnụ ahịa dị ọnụ ala na afọ ojuju ndị ahịa, anyị na-agbalị mgbe niile izute na karịa atụmanya.
Chọrọ ịmụtakwu gbasara ikpe ziri ezi asụsụ?
Daalụ maka ịnyefe!